ကျောင်းစတက်မယ့် သားသားမီးမီးတွေ ကျောင်းနေပျော်စေဖို့ နည်းလမ်း(၆)သွယ် - For her Myanmar
Knowledge, Mom, Tips
စာတော်ဖို့က နောက်မှ ယောင်းရေ.. ကျောင်းနေပျော်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်နော်
နောက်လဆိုရင် ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တော့မှာဆိုတော့ သားသားမီးမီးလေးတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ ကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေ လိုက်ဝယ်ပေးနေရတာနဲ့ မေမေတွေ အလုပ်များနေကြမှာပဲနော်။(၁)တန်း(၂)တန်းတက်ပြီးသား ကလေးတွေအနေနဲ့က ကျောင်းတက်ဖို့အသားကျပြီးသားမို့ ကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေဖြည့်ဆည်းပေးရုံနဲ့ အဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့ ဒီနှစ်မှ စာသင်ကျောင်းကို စတင်မိတ်ဆက်ရမယ့် သားသားမီးမီးတွေ အတွက်ကျပြန်တော့ ဒီလောက်နဲ့တင် မပြည့်စုံသေးပြန်ပါဘူး ယောင်းရေ…. ကျောင်းပျော်အောင်၊ ကျောင်းသွားရလို့ တချိန်လုံးငိုယိုဝမ်းနည်းနေသူ မဖြစ်အောင် ထိန်းကျောင်းတတ်ဖုိ့လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ် …
ဒီတော့ မေမေယောင်းတို့ အနေနဲ့ သားသားမီးမီးတွေ ကျောင်းနေပျော်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတော့….
Related Article >>> ကွာရှင်းပြီးနောက် ကလေးတွေကို နှစ်ယောက်တူတူအုပ်ထိန်းနည်း (၄) နည်း
(၁) ကျောင်းဖွင့်ချိန်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်အောင် စီစဉ်ထားပါ။
ကျောင်းစတက်ရမယ် ဆိုတဲ့စကားဟာ ကလေးတွေအတွက်တော့ ကြောက်စရာကောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောင်းတက်ရတာကို ကြောက်စရာထက် ပျော်စရာလို့ မြင်အောင် ကြိုတင်စီစဉ်ထားရပါမယ်။
ဥပမာ ကလေးလိုချင်တဲ့ ဖိနပ်လှလှ၊ ထီးလှလှလေးတွေ၊ ကွန်ပါဘူး လှလှလေးတွေကို ကလေးနဲ့ အတူသွားဝယ်ထားပြီး ကျောင်းဖွင့်တဲ့နေ့မှ ထုတ်ပေးတာမျိုး လုပ်ပေးပါ။ နောက်ပြီး ကျောင်းတက်ရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းကြောင်းရေးထားတဲ့ ကလေးပုံပြင်လေးတွေ၊ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေကို ကလေးနဲ့ တူတူဖတ်ပါ။
ဒီနည်းနဲ့ ကျောင်းစတက်မယ့် ကလေးရဲ့ ကြောက်စိတ်ကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး ကလေးက ကျောင်းတက်ရမယ့်နေ့ကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာ စောင့်မျှော်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာမတွေ ရိုက်တတ်ကြောင်း….. ငြိမ်ငြိမ်နေရမယ်ဖြစ်ကြောင်း စတဲ့စကားတွေနဲ့ အရင်ဆုံး မခြိမ်းခြောက်မိဖို့ လိုပါတယ်။
(၂) ပထမဆုံး၂ပတ်လောက်ကို ကျောင်းမှာနေပေးပါ။
ကျောင်းစစတက်ချင်းရက်တွေမှာ ကျောင်းပို့ပြီးတာနဲ့ အိမ်ကို တန်းပြန်တာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ကျောင်းနဲ့ နေသားမကျသေးတဲ့အပြင် အပေါင်းအသင်းမရသေးတဲ့ ကလေးအနေနဲ့ ဝမ်းနည်းငိုယိုတာ၊ ကျောင်းမှာ ဂျီတိုက်တာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပြီး နောက်ရက်တွေပါ ကျောင်းသွားဖို့ ငြင်းဆန်လာနိုင်ပါတယိ။
ဒါကြောင့် ကလေးအနေနဲ့ ကျောင်းမှာ ကျင့်သားရလာတဲ့အထိ မိဘတွေက ကလေးမြင်သာတဲ့ နေရာမှာ နေပြီး စောင့်ပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ယောင်းတို့ကလေးက စာသင်ခန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ပြုမူလဲဆိုတာကိုပါ တစ်ခါတည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
(၃) ကလေးရဲ့ အတန်းဖော် တွေ၊ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ မိတ်ဖွဲ့ပါ။
ဒီနည်းလမ်းကတော့ ယောင်းတို့ကလေးကို ကျောင်းပျော်ပြီး အပေါင်းအသင်းတွေများလာစေမယ့် နည်းတစ်ခုပါ။ ကိုယ့်ကလေးကို ခင်လာဖို့ တခြားကလေးတွေကို လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးတာ၊ မုန့်ကျွေးတာ၊ ပိတ်ရက်တွေမှာ ကစားကွင်းခေါ်သွားပြီး အတူတူကစားနိုင်ဖို့ ဖန်တီးပေးတာမျိုးကို လုပ်ပေးသင့်သလို မိဘတွေ အချင်းချင်းလည်း မိတ်ဖွဲ့ထားသင့်ပါတယ်။ မိဘချင်း ရင်းနှီးနေမှ ကိုယ့်ကလေးကို ကိုယ်မအားလပ်တဲ့ချိန် သူတို့က ကူညီကြည့်ရှူပေးနိုင်မှာပါ။
Related Article >>> ကလေးရဲ့ အသက်အရွယ်အလိုက် အိမ်မှုကိစ္စလေးတွေ တာဝန်ခွဲပေးကြမယ်
(၄) ဆရာမကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
ကလေးအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ တချို့ ပင်ကိုယ်အပြုအမူကြောင့် ဆရာမ စကားကို မနာခံဘူးဆိုပြီး အတန်းထဲမှာ အရိုက်ခံရတာ၊ အပြစ်ဒဏ်ပေးခံရတာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို အပြုအမူ၊ စရိုက်တွေရှိရင် ဆရာမကို ကြိုပြောပြထားပါ။ ကိုယ့်ကလေးရဲ့ စရိုက်အကြောင်းကို ဆရာမထက် ကိုယ်ကပဲ အသိဆုံးမဟုတ်လား။ နောက်ပြီး ကလေးရဲ့ စာသင်ခန်းတွင်း ပြဿနာတွေကို သိနိုင်ဖို့ ဆရာမနဲ့ မကြာခဏ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့လိုပါတယ် ယောင်းတို့ရေ….
(၅) အညစ်ကြေးစွန့်နည်းကို အမှီခိုကင်းကင်းနဲ့ လုပ်တတ်အောင် အိမ်မှာတည်းက သေချာသင်ပေးထားပါ။
၈နှစ် ၉နှစ်အရွယ် ရောက်နေတာတောင် အိမ်သာမှာမသွားဘဲ ဘောင်းဘီထဲမှာတင် အပေါ့အလေးစွန့်တတ်တဲ့ ကလေးမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ အညစ်ကြေးစွန့်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ယောက်တည်း လုပ်တတ်အောင် သွန်သင်မထားဘဲ မိဘကပဲ အားလုံးကို နောက်ကလိုက်လုပ်ပေးနေလို့ ဖြစ်လာတဲ့ အကျိုးဆက်တွေပါ။
ဒီလိုတွေ ဖြစ်လာရင်တော့ ကိုယ့်ကလေးဟာ စာသင်ခန်းထဲမှာ အများ နှာခေါင်းရှုံ့စရာ၊ စနောက်စရာ ကလေးလေးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးကို ဆီး၊ဝမ်း သွားချင်ရင် အောင့်မထားဘဲ ကျောင်းသန့်စင်ခန်းကို စနစ်တကျနဲ့ အမှီခိုကင်းကင်း သုံးတတ်ဖို့ လေ့ကျင့်ထားပေးပါ။
(၆) ကလေး ကျောင်းက ပြန်လာတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ တစ်နေ့တာ ဇာတ်လမ်းကို အချိန်ပေးပြီး ကြင်ကြင်နာနာ မေးမြန်းပါ။
ဒါဟာ ကလေးအနေနဲ့ ယောင်းတို့ မမြင်ကွယ်ရာ ကျောင်းမှာ ဘယ်လိုပြုမူနေလဲ၊ ဘယ်လို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ကြုံနေရလဲ၊ အနိုင်ကျင့်ခံနေရလား စတာတွေကို သိနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းပါ။
တချို့ကလေးတွေက စကားနည်းတာမို့ ကိုယ်က သေချာ စ မမေးရင် မပြောပြဘဲ မြုံထားတတ်ကြပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆရာမတစ်ယောက်တည်းကလည်း ကျောင်းသားအားလုံးကို ထောင့်စေ့အောင် ကြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးရဲ့ ကျောင်းတွင်းကိစ္စအဖြာဖြာကို ကျောင်းက ပြန်လာတိုင်း ဂရုတစိုက် အမြဲမေးမြန်းနေဖို့လိုပါတယ်။ ကလေးရဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေကို သိမှ နည်းလမ်း ရှာလို့ရမှာ မဟုတ်ပါလား…
ဒီအချက်လေးတွေသိထားမယ်ဆိုရင်တော့ သားသားမီးမီးတွေ ကျောင်းနဲ့စတင်ထိတွေ့ချိန်မှာ အဆင်ပြေပါ့မလားဆိုပြီး တွေးပူနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်…ယောင်းတို့သားသားမီးမီးတွေ အားလုံး ကျောင်းနေပျော်ပြီး စာတော်ကြပါစေ…
Reference links: kidspot , health.harvard
စာတျောဖို့က နောကျမှ ယောငျးရေ.. ကြောငျးနပြေျောဖို့က ပိုအရေးကွီးပါတယျနျော
နောကျလဆိုရငျ ကြောငျးတှပွေနျဖှငျ့တော့မှာဆိုတော့ သားသားမီးမီးလေးတှအေတှကျ လိုအပျတဲ့ ကြောငျးသုံးပစ်စညျးတှေ လိုကျဝယျပေးနရေတာနဲ့ မမေတှေေ အလုပျမြားနကွေမှာပဲနျော။(၁)တနျး(၂)တနျးတကျပွီးသား ကလေးတှအေနနေဲ့က ကြောငျးတကျဖို့အသားကပြွီးသားမို့ ကြောငျးသုံးပစ်စညျးတှဖွေညျ့ဆညျးပေးရုံနဲ့ အဆငျပွနေိုငျပမေဲ့ ဒီနှဈမှ စာသငျကြောငျးကို စတငျမိတျဆကျရမယျ့ သားသားမီးမီးတှေ အတှကျကပြွနျတော့ ဒီလောကျနဲ့တငျ မပွညျ့စုံသေးပွနျပါဘူး ယောငျးရေ…. ကြောငျးပြျောအောငျ၊ ကြောငျးသှားရလို့ တခြိနျလုံးငိုယိုဝမျးနညျးနသေူ မဖွဈအောငျ ထိနျးကြောငျးတတျဖုိ့လညျး လိုအပျပါသေးတယျ …
ဒီတော့ မမေယေောငျးတို့ အနနေဲ့ သားသားမီးမီးတှေ ကြောငျးနပြေျောအောငျ ဘယျလိုလုပျဆောငျနိုငျမလဲဆိုတော့….
Related Article >>> ကှာရှငျးပွီးနောကျ ကလေးတှကေို နှဈယောကျတူတူအုပျထိနျးနညျး (၄) နညျး
(၁) ကြောငျးဖှငျ့ခြိနျကို စိတျလှုပျရှားစရာဖွဈအောငျ စီစဉျထားပါ။
ကြောငျးစတကျရမယျ ဆိုတဲ့စကားဟာ ကလေးတှအေတှကျတော့ ကွောကျစရာကောငျးနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြောငျးတကျရတာကို ကွောကျစရာထကျ ပြျောစရာလို့ မွငျအောငျ ကွိုတငျစီစဉျထားရပါမယျ။
ဥပမာ ကလေးလိုခငျြတဲ့ ဖိနပျလှလှ၊ ထီးလှလှလေးတှေ၊ ကှနျပါဘူး လှလှလေးတှကေို ကလေးနဲ့ အတူသှားဝယျထားပွီး ကြောငျးဖှငျ့တဲ့နမှေ့ ထုတျပေးတာမြိုး လုပျပေးပါ။ နောကျပွီး ကြောငျးတကျရတာ ပြျောဖို့ကောငျးကွောငျးရေးထားတဲ့ ကလေးပုံပွငျလေးတှေ၊ ကာတှနျးဇာတျကောငျတှကေို ကလေးနဲ့ တူတူဖတျပါ။
ဒီနညျးနဲ့ ကြောငျးစတကျမယျ့ ကလေးရဲ့ ကွောကျစိတျကို လြှော့ခပြေးနိုငျပွီး ကလေးက ကြောငျးတကျရမယျ့နကေို့ စိတျလှုပျရှားစှာ စောငျ့မြှျောလာပါလိမျ့မယျ။
ဒီနရောမှာ ကြောငျးနဲ့ပတျသတျပွီး ဆရာမတှေ ရိုကျတတျကွောငျး….. ငွိမျငွိမျနရေမယျဖွဈကွောငျး စတဲ့စကားတှနေဲ့ အရငျဆုံး မခွိမျးခွောကျမိဖို့ လိုပါတယျ။
(၂) ပထမဆုံး၂ပတျလောကျကို ကြောငျးမှာနပေေးပါ။
ကြောငျးစစတကျခွငျးရကျတှမှော ကြောငျးပို့ပွီးတာနဲ့ အိမျကို တနျးပွနျတာမြိုးမလုပျသငျ့ပါဘူး။ ကြောငျးနဲ့ နသေားမကသြေးတဲ့အပွငျ အပေါငျးအသငျးမရသေးတဲ့ ကလေးအနနေဲ့ ဝမျးနညျးငိုယိုတာ၊ ကြောငျးမှာ ဂြီတိုကျတာမြိုး ဖွဈလာနိုငျပွီး နောကျရကျတှပေါ ကြောငျးသှားဖို့ ငွငျးဆနျလာနိုငျပါတယိ။
ဒါကွောငျ့ ကလေးအနနေဲ့ ကြောငျးမှာ ကငျြ့သားရလာတဲ့အထိ မိဘတှကေ ကလေးမွငျသာတဲ့ နရောမှာ နပွေီး စောငျ့ပေးရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။ ဒီနညျးနဲ့ ယောငျးတို့ကလေးက စာသငျခနျးပတျဝနျးကငျြမှာ ဘယျလိုတုံ့ပွနျပွုမူလဲဆိုတာကိုပါ တဈခါတညျး လလေ့ာနိုငျပါတယျ။
(၃) ကလေးရဲ့ အတနျးဖျော တှေ၊ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတှနေဲ့ မိတျဖှဲ့ပါ။
ဒီနညျးလမျးကတော့ ယောငျးတို့ကလေးကို ကြောငျးပြျောပွီး အပေါငျးအသငျးတှမြေားလာစမေယျ့ နညျးတဈခုပါ။ ကိုယျ့ကလေးကို ခငျလာဖို့ တခွားကလေးတှကေို လကျဆောငျပစ်စညျးပေးတာ၊ မုနျ့ကြှေးတာ၊ ပိတျရကျတှမှော ကစားကှငျးချေါသှားပွီး အတူတူကစားနိုငျဖို့ ဖနျတီးပေးတာမြိုးကို လုပျပေးသငျ့သလို မိဘတှေ အခငျြးခငျြးလညျး မိတျဖှဲ့ထားသငျ့ပါတယျ။ မိဘခငျြး ရငျးနှီးနမှေ ကိုယျ့ကလေးကို ကိုယျမအားလပျတဲ့ခြိနျ သူတို့က ကူညီကွညျ့ရှူပေးနိုငျမှာပါ။
Related Article >>> ကလေးရဲ့ အသကျအရှယျအလိုကျ အိမျမှုကိစ်စလေးတှေ တာဝနျခှဲပေးကွမယျ
(၄) ဆရာမကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဆှေးနှေးတိုငျပငျပါ။
ကလေးအနနေဲ့ သူ့ရဲ့ ထူးခွားတဲ့ တခြို့ ပငျကိုယျအပွုအမူကွောငျ့ ဆရာမ စကားကို မနာခံဘူးဆိုပွီး အတနျးထဲမှာ အရိုကျခံရတာ၊ အပွဈဒဏျပေးခံရတာမြိုး ရှိနိုငျပါတယျ။ ဒီလို အပွုအမူ၊ စရိုကျတှရှေိရငျ ဆရာမကို ကွိုပွောပွထားပါ။ ကိုယျ့ကလေးရဲ့ စရိုကျအကွောငျးကို ဆရာမထကျ ကိုယျကပဲ အသိဆုံးမဟုတျလား။ နောကျပွီး ကလေးရဲ့ စာသငျခနျးတှငျး ပွဿနာတှကေို သိနိုငျဖို့ ဆရာမနဲ့ မကွာခဏ တှဆေုံ့ ဆှေးနှေးတိုငျပငျဖို့လိုပါတယျ ယောငျးတို့ရေ….
(၅) အညဈကွေးစှနျ့နညျးကို အမှီခိုကငျးကငျးနဲ့ လုပျတတျအောငျ အိမျမှာတညျးက သခြောသငျပေးထားပါ။
၈နှဈ ၉နှဈအရှယျ ရောကျနတောတောငျ အိမျသာမှာမသှားဘဲ ဘောငျးဘီထဲမှာတငျ အပေါ့အလေးစှနျ့တတျတဲ့ ကလေးမြိုးတှေ ရှိပါတယျ။ ဒါဟာ အညဈကွေးစှနျ့တာနဲ့ ပတျသကျပွီး တဈယောကျတညျး လုပျတတျအောငျ သှနျသငျမထားဘဲ မိဘကပဲ အားလုံးကို နောကျကလိုကျလုပျပေးနလေို့ ဖွဈလာတဲ့ အကြိုးဆကျတှပေါ။
ဒီလိုတှေ ဖွဈလာရငျတော့ ကိုယျ့ကလေးဟာ စာသငျခနျးထဲမှာ အမြား နှာခေါငျးရှုံ့စရာ၊ စနောကျစရာ ကလေးလေးအဖွဈ သတျမှတျခံရနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကလေးကို ဆီး၊ဝမျး သှားခငျြရငျ အောငျ့မထားဘဲ ကြောငျးသနျ့စငျခနျးကို စနဈတကနြဲ့ အမှီခိုကငျးကငျး သုံးတတျဖို့ လကေ့ငျြ့ထားပေးပါ။
(၆) ကလေး ကြောငျးက ပွနျလာတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ တဈနတေ့ာ ဇာတျလမျးကို အခြိနျပေးပွီး ကွငျကွငျနာနာ မေးမွနျးပါ။
ဒါဟာ ကလေးအနနေဲ့ ယောငျးတို့ မမွငျကှယျရာ ကြောငျးမှာ ဘယျလိုပွုမူနလေဲ၊ ဘယျလို စိတျပိုငျးဆိုငျရာ နဲ့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ပွဿနာတှကေို ကွုံနရေလဲ၊ အနိုငျကငျြ့ခံနရေလား စတာတှကေို သိနိုငျတဲ့ နညျးလမျးပါ။
တခြို့ကလေးတှကေ စကားနညျးတာမို့ ကိုယျက သခြော စ မမေးရငျ မပွောပွဘဲ မွုံထားတတျကွပါတယျ။ နောကျပွီး ဆရာမတဈယောကျတညျးကလညျး ကြောငျးသားအားလုံးကို ထောငျ့စအေ့ောငျ ကွညျ့နိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။
ဒါကွောငျ့ မိဘတှအေနနေဲ့ ကလေးရဲ့ ကြောငျးတှငျးကိစ်စအဖွာဖွာကို ကြောငျးက ပွနျလာတိုငျး ဂရုတစိုကျ အမွဲမေးမွနျးနဖေို့လိုပါတယျ။ ကလေးရဲ့ အဆငျမပွမှေုတှကေို သိမှ နညျးလမျး ရှာလို့ရမှာ မဟုတျပါလား…
ဒီအခကျြလေးတှသေိထားမယျဆိုရငျတော့ သားသားမီးမီးတှေ ကြောငျးနဲ့စတငျထိတှခြေိ့နျမှာ အဆငျပွပေါ့မလားဆိုပွီး တှေးပူနစေရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နျော…ယောငျးတို့သားသားမီးမီးတှေ အားလုံး ကြောငျးနပြေျောပွီး စာတျောကွပါစေ…
Tags: #mom #tips, baby, children, Happy, Knowledge, mom, school, Start, tips